बच्चाहरुको दाँतमा किरा लग्न नदिन के गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
# दातमा किरा लाग्ने कारणहरु
# कस्ता खाने कुराले दाँतमा किरा लाग्छ ?
# दाँतमा किरा लाग्नाले बच्चालाई कसरी असर गर्छ ?
# बच्चाहरुको दाँतमा किरा लाग्नबाट कसरी बचाउने ?
दाँतमा किरा लाग्न नदिन दिनमा दुइपटक दाँत माझ्नुपर्छ । बच्चाहरुले राम्रोसँग दाँत माझ्न सक्दैनन् । त्यसकारण कम्तीमा एकपटक आमबाबुले राम्रोसँग दाँत माझी दिनुपर्छ । वर्षमा दुइपटक दन्त चिकित्सककोमा गएर दाँत जँचाउनुपर्छ ।
Don't Miss it यी ४ अवस्थामा सोयाबिन खानु हानिकारक
Up Next Do you really love yourself? के तपाईं आफैलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ ? यसरी जाँच्नुहोस
आरु खादा हुने फाइदाहरु यसप्रकार छन् |
आरु निकै फाइदाजनक फल मानिन्छ । हल्का गुलियो यसको विशेषता त हो | आरु खादा हुने फाइदाहरु १. आँखाको दृ्श्य…